AIRTOX Kabaha badbaadada FM1 - AIRTOX
AIRTOX Kabaha badbaadada FM1
FM1 kabo badbaado oo ka yimid AIRTOX
Qaabka FM1 ka Airtox waa Super Charged Kabo badbaado oo khafiif ah oo wareegsan oo dhan ah oo neefsan kara.
Qaabkan ayaa bixiya AirtoxIlaaliyaha ciddiyaha sumadda: Whitelayer®. Qalabkan ayaa asal ahaan lagu soo saaray Mareykanka iyadoo mashruuc gaar ah u ah askarta caanka ah ee Mareykanka, Navy Seals, kuwaasoo u baahnaa jaakadaha dabka lagu ridi karo gaar ahaan kuwa fudud oo dabacsan. Whitelayer® waa mid aad u jilicsan isla markaana isla markaana ka adag birta. Isku dhafan Whitelayer® ilaalinta cidiyaha ee FM1 ayaa culeyskeedu yahay 32 grams waana sidaas 55% ka fudud marka la barbar dhigo agabyada kale ee waardiyaha. Sida gunno dheeraad ah, walaxda ayaa ah mid aad u dabacsan, neefsanaya iyo xakamaynta qoyaanka.
FM1 waxay bixisaa raaxo aad u sarraysa oo heer sare ah waana mid aad u jilicsan oo u kulaylka u adkaysta ilaa 300 ° C. Sare waxaa leh the PowerBreeze® Nidaamka socodka hawada, kaas oo gacan ka geysanaya bixinta hufnaan firfircoon iyo neefsashada wareegga hawada ee kabaha. Qaabku waa birta bilaa macaan, oo aad loo neefsan karo oo kaliya waxaa lagula talinayaa in lagu isticmaalo aagagga aan u baahnayn adkeysiga biyaha. Dhexdhexaad.
Qaabkan ayaa bixiya AirtoxIlaaliyaha ciddiyaha sumadda: Whitelayer®. Qalabkan ayaa markii hore lagu soo saaray gudaha Maraykanka mashruuc gaar ah oo loogu talagalay askarta Ameerikaanka ah, Navy Seals, kuwaas oo u baahday jaakadaha rasaasta celiya ...
WHITELAYER® ciddiyaha ilaaliya
COOL&ME® xakameynta qoyaanka
Furka suul cufan fudud oo TPA-Plast ah
Kuleylka hawo u adkaysan kara 300 ° C NRT
Alaabooyinka kale ee tan range
AIRTOX Sandalka badbaadada ee FS22 Formula
AIRTOX FL4 kabo badbaado Formula
AIRTOX FL44 kabo badbaado Formula
AIRTOX Kabaha badbaadada FM11 Formula
+ 45 71994040